Ukukhishwa kwezindaba - Abakhiqizi be-Apicmo cdmo
06 / 05 / 2019Posted by: I-APICMOIsigaba: Ulwazi lwezokwelapha0 Ukuthandwa
Thola indima ye-GM1 ebuchosheni be-neurological, izakhiwo zayo eziguga ukuguga, kanye nemiphumela yomtholampilo ohlelweni lwezinzwa eziphakathi nendawo.
Iyini i-Monosialotrahexosylganglioside Solidum (GM1)
I-sodium ye-Monosialotetrahexosylganglioside isisindo se-neurotrophic esichazayo GM1. Qhubeka Reading
I-pyridine iyinhlanganisela eyisisekelo ye-heterocyclic uhlobo lwe-azine. I-Pyridine itholakala ku-benzene ngokufaka esikhundleni seqembu le-CH nge-N-athomu. Isakhiwo sePyridine sifana nesakhiwo se-benzene, ngoba sihlobene nokushintshwa kweqembu le-CH ngu-N. Ukuhlukana okukhulu kuhlanganisa:
08 / 28 / 2018Posted by: I-APICMOIsigaba: Ulwazi lwezokwelapha0 Ukuthandwa
I-heterocyclic compound, eyaziwa nangokuthi isakhiwo sezindandatho ngokuyinhloko isakhi esiqukethe ama-athomu wezinto ezimbili ezihlukene njengamalungu endandatho / izindandatho zayo. Ama-Heterocyclic compounds mhlawumbe ayingxenye ehlukahlukene kunazo zonke futhi eningi kunazo zonke emndenini wezinhlanganisela eziphilayo.
I-spiro i-compound iyinhlanganisela ephilayo lapho izindandatho ezimbili ze-bicyclic ziboshelwe i-athomu elilodwa. Ngokwemvelo, izakhiwo zamasongo zingase zibe ezifanayo noma ezihlukile, futhi i-athomu ehlanganisa lezi zindandatho zibizwa ngokuthi i-spiroatom (i-atom ye-spiral), ngokuvamile I-grade 4 carbon (eyaziwa nangokuthi i-carbon carbon) futhi ingakwazi futhi yi-silicon, i-phosphorus, noma i-arsenic
08 / 18 / 2018Posted by: I-APICMOIsigaba: Ulwazi lwezokwelapha0 Ukuthandwa
I-2- I-Chloro-5 i-methylpyrimidine ine-powder ephuzi ekhanyayo ebonakalayo ekamelweni lokushisa. Abanye bangachaza umthunzi wombala njengemhlophe. Akunamakha nobunzima bama-128.56 amagremu ngayinye. I-formula yayo yamakhemikhali ibonakala njenge-C5H5CIN2 ne-Simplified Molecular - Input Line Entry System (SMILES) njenge-CC1 = CN = C (CL) N = C1. I-compound inephuzu lokuqhakazila eliphakathi kwe-89-92 degrees centigrade, ne-point of abibula ye-239
07 / 19 / 2018Posted by: I-APICMOIsigaba: Okuqukethwe kwe-CMO1 Comment0 Ukuthandwa
Ngaphezulu kweminyaka engu-10 esebenzayo emkhakheni we-chemical synthesis synthesis, esebenze ku-GSK, obhekene nokuthengisa eNyakatho Melika, uye wazuza imiphumela emihle.
07 / 18 / 2018Posted by: I-APICMOIsigaba: Okuqukethwe kwe-CMO1 Comment0 Ukuthandwa
Iqeqeshwe eMnyangweni wezakhi zemvelo, eStanford University, eStanford University
07 / 18 / 2018Posted by: I-APICMOIsigaba: Ulwazi lwezokwelapha2 Amazwana0 Ukuthandwa
Amakhono amahle kakhulu embonini yobuciko bokuhlanganiswa kwama-heterocyclic compounds. Ukusetshenziswa okunamandla kwenhlanganisela yama-reagents kanye nobuchwepheshe obukhona ekusebenzisaneni kwe-benzonitrile, phenol, naphthol, coumarin, thiocoumarin, quinoline, quinozoline, pyrimidine, pyridine, indole, indazole, imidazole kanye ne-benzimidazole i-heterocycles ekhishwe.